Moderat-ka oo ka guuxay hadalkii wasiiraddda arrimaha dibadda ee ka dhanka ahaa Nato | Somaliska
Afhayeenka waaxda difaaca ee xisbiga Moderat-ka ee dalkaan Iswiidhan Hans Wallmark, ayaa ka guuxay hadalkii wasiiradda arrimaha dibadda Iswiidhan ee ay dhawaan ku dhaliishay isbaheeysiga gaashaan-buurta Nato.
“Nato waa koox ay wada shaqeyn muhiim ahi naga dhaxeeyso in sidaas loo weerarana ma ahan” ayuu yiri isagoo la hadlaya telefeyshinka SVT qeybtiisa wararka.
Ka guuxista hadalka afhayeenka siyaasadda difaaca ayaa yimid ka dib markii wasiiradda arrimaha dibadda Iswiidhan Margot Wallström sheegtay in isbaheysiga Nato ay faraha la soo galeen siyaasadda Iswiidhan.
Dowladda Iswiidhan ayaa dhinaca kalena waxaa ay ka cago jiideeysa in ay qalinka ku duugto go,aan Gollaha Ammaanka Qarammadda Midoobbey ku doonayo in loo codeeyo in caalamka laga mamnuuco barnaamijka nukliyeerka ah. Tanina waa midda keentay in wakiilka Mareykanka ee u fadhiya NatoKay Bailey Hutchison uu uga digay dowladda Iswiidhan inoo go’aan noocan ah oo ay saxiixdo uu abuuri karto mugdi soo kala dhex gala isbaheeysiga iyo Iswiidhan. Hadalkan ayaa ayaa waxaa caro ka muujisay wasiiradda arrimaha dibadda Iswiidhan Margot Wallström.
“Nato waxaa laga doonayaa ineey ka fogaato ineey tiraahdo waxyaabo culeys iyo hanjabaad ku keeni kara Iswiidhan”
Bisha sibteembar ee sanadkan ayaa dalka Iswiidhan waxaa uu galaya doorashooyinka, baarlamaanka, goboladda iyo maamulka degmooyinka. In caalamku sameeyo heshiish caalami ah oo lugu mamnuucayo sunta nukliyeerka ay saxiixdo waxaa uu iman karaa doorashadda ka dib. Dowladana waxaa ay u saartay gudi soo gudbiya kama dambeys warbixinta ugu dambeeysa ee arrimahan dhamaadka bisha oktoobar ee sanadkan.
Hans Wallmark, waxaa uu ku doodaya in mowduucan aanney dowladda si dhameeystiran baarlamaanka hortiisa si qote dheer aaneey uga hadlin. Si aaneey ugu hor kufin kalsoonida caalamka ku qabo Iswiidhan waa ineey su,aalahan ay wax ka qabataa ayuu yiri.